Ntughari ndi ozo nke Galaxy S6 nwere ike ibia | Gam akporosis
Nyaahụ anyị nọ na-egosi ụfọdụ ntụgharị nke Galaxy S6 ya na mkpuchi na-eso ya edemede nke asịrị kedu ihe na-abịarute ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị niile na ọkọlọtọ ọhụrụ a nke ụlọ ọrụ Korea bụ Samsung.
Ọhụrụ sụgharịta gosi anyị ntakịrị ihe ka ekwentị ọhụrụ a ga-abụ akpọ Galaxy S6 na site na nke a na-atụ anya ihe niile. Ma ọ dịkarịa ala ụfọdụ mgbanwe ndị mere ka ọ dị iche na nke afọ gara aga. Ọ bụ ezie na nsụgharị ndị a ahapụghị anyị ka anyị na-ama jijiji dị ka à ga-asị na ọ bụ nkwụsị nke ọhụrụ HTC One M9, ha na-abawanye ọchịchọ ka emesị hụ atụmatụ nke Galaxy S6 ọhụrụ. Nzube nke enwere ike tinye n'ime ya n'ụzọ zuru oke mana na ruo mgbe anyị ga-ahụ ezigbo onyinyo ya, anyị enweghị ike ikwenye onwe anyị.
Ndị ntụgharị na ndị ọzọ sụgharịrị
Nke flagship ọhụrụ nke ụlọ ọrụ Korea ọtụtụ narị akụkọ na-abịakarị ruo mgbe e mechara weta ya na mmemme Unpacked kwa afọ. Taa, anyị nwere nsụgharị ole na ole na-egosi nkuku dị mma, nke a bụ ngwoolu nke imewe etinye na Galaxy S6 ọhụrụ ma ọ bụrụ na ihe oyiyi ndị a ziri ezi.
Ihe ọ na-enweta bụ bụrụ ngwaọrụ ahụ nwere ahịrị ahịrị ndịicheỌma na nkecha, ihe Samsung Fans na-atụ anya. Agbanyeghị na ndị okike nke nsụgharị a ejirila ahịrị ole na ole jikọtara ọnụ na-ahụbeghị nke ọma na ọdụ Samsung nke emepere n'afọ ndị gara aga.
Ma ọ bụghị naanị Ọ na-anọgide na-amata nke ọma na ezigbo onyonyo nke ọhụụ Galaxy S6 ga-ewetara anyị. Naanị ihe karịrị izu 2 na anyị ga-agba àmà site na Samsung n'onwe ya ọhụrụ Galaxy S6 na akụkọ ya niile na atụmatụ ya na atụmatụ ahụ anyị na-atụ anya dị adị ma bụrụ mgbanwe doro anya na ụdị ekwentị ndị a. Ọ dịkarịa ala ihe Galaxy S2 bụbu, nnukwu ekwentị nke dugara Samsung na stardom na gam akporo. E nwere obere na obere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Ntughari ndi ozo nke Samsung Galaxy S6
Isi okpuru bu otu IPHONE 5!
Felipe Jimenez Diaz Granados dijo
Xperia Z3 na iPhone 6 n'ọnụ?
Kedu ihe dị iche iche ... ...